ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု
Tag Archives: ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ကောလိပ်ဘောလုံး PLAYOFF ပိုမီဒီယာလွှမ်းခြုံ Enable လုပ်ဖို့ Veritone ရဲ့ AI အများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု Solutions အသုံးပြု
Costa Mesa, ကာလီဖိုးနီးယား - ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2019 - Veritone Inc ကို (Nasdaq: အလွန်) ။ , အတုထောက်လှမ်းရေး, aiWARE ™များအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး operating system ကို၏ဖန်ဆင်းရှင်, ယနေ့ကောလိပ်ဘောလုံး PLAYOFF (CFP) တစ်ခုတိုးချဲ့ဖြန့်ကျက်ရေးအတွက်ကြေညာခဲ့သည် ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များပေးနှင့်၎င်း၏မှချမ်းသာ access ကိုမှ Veritone ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် 2019 CFP အမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်အဘို့န်ဆောင်မှုများ ...
OoyalaREACH, 24i, Simplified ပြီးတော့ Accelerator OTT အကြောင်းအရာ Delivery အားဖြင့် Powered
Ooyala, မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, 24i, ကမ္ဘာ့အဘို့အဦးဆောင်သည်အင်တာနက်တီဗီ app ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ်မျိုးစုံတီဗီပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံ OTT အတွေ့အကြုံများစေလွှတ်ဖန်တီးနေတဲ့ကြံ့ခိုင်အဆုံးမှအဆုံးသို့ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူမန်နေဂျင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာ ထိပ်တန်းမီဒီယာကုမ္ပဏီများ, OoyalaREACH တစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်း Configure လုပ်လို့ရတဲ့ OTT အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုများနှင့်ဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်ကိုဖွင့်ရန်။ မီဒီယာပိုင်ရှင်တွေ ...
Veritone Now ကိုမိုးတိမ်အတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်မော်ကွန်းတင်ပြီးထုတ်လွှင့်အပြီးအစီး AI အ-Driven ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငွေရှာခြင်းဖြေရှင်းနည်း Features
အမ်စတာဒမ် IBC2018 - စက်တင်ဘာ 14, 2018 - Veritone® Inc ကို (NASDAQ: အလွန်), အတုထောက်လှမ်းရေး (AI အ) နှင့်သိမြင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ AI အဘို့အယင်း၏ aiWARE ™လည်ပတ်မှုစနစ်၏ပေါင်းစည်းမှုတိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်, Cloud-ဇာတိကဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများနှင့်ယခု Veritone ကုမ္ပဏီအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ။ Veritone ဖြစ်ပါတယ် ...
Bleacher အစီရင်ခံစာမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများ, ပြင်ဆင်ပါစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကယ်ယူမှဝင်ရိုး ai နဲ့ Amazon Web Services အသုံးပြု
လက်ပံ, အော်ရီဂွန် - ဝင်ရိုး ai Bleacher အစီရင်ခံစာမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်နဲ့ Amazon Web Services (AWS) ဒြပ်စင်သည်ဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းနည်းများ, ကွိုတငျပွငျဆငျစီမံခန့်ခွဲ, နှင့်၎င်း၏အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာဂုဏ်သတ္တိများကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ ai ရိုးပေါ်မှာစံတော်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်, Bleacher အစီရင်ခံစာသတင်းကိုချိုးဖောက်နှင့်အတူပရိသတ်တွေထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါက ...
istituto Luce-Cinecittàတစ်ကမ္ဘာလုံး၎င်း၏သမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင် Catalog မြှင့်တင်ပေးရန် WCPMedia ရဲ့မိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်
ရောမမြို့ - အီတလီရဲ့သမိုင်းဝင် istituto Luce-Cinecittàအီတလီအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၎င်း၏ကြီးမားသော catalog စီမံခန့်ခွဲရန် WCPMedia န်ဆောင်မှုများကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အဆိုပါနိုင်ငံပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် archive ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝယ်လက်မှရုပ်ရှင်, စျေးကွက်ရောင်းချဖြန့်ဖြူးဖို့ WCPMedia ၏ cloud-based ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကက်တလောက်ထိုကဲ့သို့သော Ettore Scola, Ermanno Olmi နှင့်မာရီယို Monicelli အဖြစ်ဒါရိုက်တာများအနေဖြင့်ဂန္အပါအဝင်ရုပ်ရှင်ရာပေါင်းများစွာ features ...
အဆိုပါအာဖရိက Channel ကိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်အပေါ်အကြောင်းအရာရောင်းဖို့ WCPMedia န်ဆောင်မှုများပေးရန်နှစ်မြောက်မွေးနေ့
channel ရဲ့ Los Angeles မြို့ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ client base ကိုနဲ့လုံလုံခြုံခြုံအကြောင်းအရာဝေမျှဖို့ကို virtual စိစစ်အခန်းထဲမှာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Los ANGELES- Los Angeles မြို့အခြေစိုက်အဆိုပါအာဖရိက Channel ကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်, streaming များဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကတခြားဖြန့်ဖြူးဆိုင်များတွင်မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာအတွက် WCPMedia န်ဆောင်မှုများ '' cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအသုံးပြုနေသည်။ အဆိုပါအာဖရိက Channel ကိုမကြာသေးမီကမူရင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ထုတ်လုပ်မှုလက်မောင်း, tac Studios ကဖြန့်ချိ ...
အောင်မြင်မှုများ Entertainment က WCPMedia တိမ်တိုက်-based File Transfer ပလက်ဖောင်းချမှတ်
ကနေဒါစတူဒီယိုဦးဆောင်နိုင်ငံတကာက clients များရန်၎င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားစာကြည့်တိုက်ပို့ဘို့ cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း leverages ။ တိုရွန်တို - ချီးမြှင့်-အနိုင်ရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတူဒီယိုအောင်မြင်မှုများ Entertainment ကယနေ့သူတို့ဖောက်သည်မိမိတို့၏ပရီမီယံအကြောင်းအရာများ၏ပို့ဆောင်မှုများအတွက် WCPMedia န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်တစ်ဦးလုံးဝ cloud-based ပေးပို့မှုစနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြကြေညာခဲ့သည်; အဓိကကွန်ရက်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများ။ တစ်ဦးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ် ...
WCPMedia န်ဆောင်မှုများကိန်းမှာတိမ်တိုက်ထုတ်လုပ်မှု Workflows ဆွေးနွေးရန်
ဩဂုတ်အရောင်, Eastman Kodak နှင့်ရောမတက္ကသိုလ်မှကိုယ်စားလှယ်များလည်းစနေနေ့, ကိန်း '' အီတလီ Pavilion မှာမေလ 20th ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ်။ ကိန်း-WCPMedia န်ဆောင်မှုများနိုင်ငံတော်သမ္မတ Cristina Molinari နှင့်ဒုသမ္မတစစ်ဆင်ရေး၏ Giovanni Contri ပိုပိုပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာကိန်းမှာအထူးတင်ဆက်မှုအတွက်မိုဃ်းတိမ်ကိုမှသူတို့ရဲ့ Workflows ရွေ့လျားနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ် ...
Electus အဆိုပါ WCPMedia န်ဆောင်မှုများတိမ်တိုက်လက်ခံ
နိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းထုတ်လွှင့်ရန်၎င်း၏ရေပန်းစားရုပ်မြင်သံကြားရှိုးဖြန့်ဝေဖို့ cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းန်ထမ်း။ HOLLYWOOD- Entertainment ကစတူဒီယို Electus မီဒီယာအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးများ၏အနာဂတ်မမြင်စဖူးနှင့်၎င်း၏အမည်ကို WCPMedia န်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ဂျူရီများကထမ်းရွက် Gryllis, ဂျိန်းဟာဗာဂျင်း, Fameless နှင့်စတိုင်နှင့်အတူတောရိုင်းကို run ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဖြန့်ဖြူး, Electus စတင် ...
cloud-based ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနခေါင်းဆောင်နေ့စဉ်သတင်းစာများစီမံခန့်ခွဲမှု, transcoding, ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုပူးပေါင်းတိုးတက်လာဖို့ features အသစ်တွေကိုထပ်ပြောသည်။ ဟောလိဝုဒ်-WCPMedia န်ဆောင်မှုများယနေ့, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်သူများပိုကောင်းစတိုးဆိုင်ကိုကူညီစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာတစ်လျှောက်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမျှဝေဖို့က၎င်း၏စျေးကွက်-ဦးဆောင် cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုကြေငြာလိုက်သည်။ နယူးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတိုးမြှင့်မှုများနေ့စဉ်သတင်းစာများအပါအဝင်အဓိကထုတ်လုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုများဖြေရှင်းရန် ...
WCPMedia န်ဆောင်မှုများ '' ဖြစ်သူ Kenneth yas 23rd နှစ်ပတ်လည် HPA Tech မှသီးသန့်မှာတိမ်တိုက်အပေါ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းဆွေးနွေးရန်
နံနက်စာစားပွဲဝိုင်းအစည်းအဝေးများ Post-ထုတ်လုပ်မှုအပ်နှံမှုနှင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများအပြောင်းအလဲနဲ့သစ်ရွေးချယ်မှုများပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟောလိဝုဒ်-WCPMedia န်ဆောင်မှုများမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ-အမေရိကတိုက်ဖြစ်သူ Kenneth yas ထွန်းသစ်စ cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာဟာဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံးရဲ့ 23rd နှစ်ပတ်လည် HPA မှာနှစ်ခုနံနက်စာစားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများအတွက်အသစ် workflow နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများအတွက်အခွင့်အလမ်းသစ်ကို Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အခြားဘယ်လိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ် အိန္ဒိယဝဲလ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Tech မှသီးသန့်။ ...
WCPMedia န်ဆောင်မှုများ cloud-based ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့ဖြန့်ဖြူးမည့်အင်္ဂါရပ်များတိုးချဲ့ခြင်း
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေးပို့အတွက်တီထွင်မှုကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာမှပေးပို့အကြောင်းအရာကပိုမိုလွယ်ကူ, မြန်ဆန်ပိုမိုလုံခြုံစေပါ။ ဟောလိဝုဒ်-WCPMedia န်ဆောင်မှုများကြောင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူစတူဒီယို, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာစျေးကွက်မှရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူရန်အဘို့အအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းက၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအသစ် features တွေတစ်နံပါတ်ထည့်ထားပါတယ် ...
BEST PRACTICE: အသံလွှင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှု
အဆိုပါပိုကောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်စစ်ဆေးမှုများအတွက်အမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအမြိုးမြိုးကိုစောင့်ရှောက်။ သူတို့ကတစ်ခုတည်း interface ကိုသို့အရာအားလုံးစုစည်းနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို, စီမံကိန်းကိုဖိုင်များ, script များခြေရာခံစောင့်ရှောက် (မိတ္တူ၌ရှိသကဲ့သို့!) နှင့်အချို့သောပင်ရရှိနိုင်ပါသိုလှောင်မှုစောင့်ကြည့်။ အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ် "အနှစ်သာရ" - အမှန်တကယ်ကလစ်) နှစ်ဦးစလုံး၏ဖွဲ့စည်းနှင့် metadata (ထိုခေါင်းစဉ်, စာရေးဆရာ, ဖန်ဆင်းခြင်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာ၏ဖော်ပြချက် ...